Sudanta Konfured oo saldhigyo ciidan siinaysa Jabhadaha Itobiya iyo Woyanaha walaacsan. | ogaden24
Sudanta Konfured oo saldhigyo ciidan siinaysa Jabhadaha Itobiya iyo Woyanaha walaacsan.
Jan 24, 2017 - Aragtiyood
Xukuumada Woyanaha ayaa walaac xoogan ka muujisay warar isa soo Taraya oo sheegaya in dawlada Suudaanta Konfured, Qorshaynayso inay Jabhadaha Hubaysan ee Itobiya Fadhiisimo ciidan kasamaysteen dalkeeda.
Walaaca xukuumada Woyanaha ayaa daba socda booqasho dhowaan madaxwaynaha Sudanta Konfured uu kutagay magaalada Qahira ee xarunta dalka Masar, halkaasi oo sida xogta lagu helayo Ajandaha shirka Labada madaxwayne uu Qodob rasmi ah ka ahaa soo dhowaynta iyo saldhigyo siinta mucaaradka Hubaysan ee Itobiya.
Xukuumadaha Jubba iyo Addis ababa ayuu in muda ah xidhiidhkoodu aad u Hooseeyay waxayna Sudanta Konfureed Horay u sheegtay in Itobiya Hubayso Qaar kamida kooxaha mucaaradsan maamulka Selva Kiir, balse maamulka Woyanaha ayaan wax Jawaab ah kabixin eedaynta xukuumada Jubba.
Sargaal katirsan wasaarada arimaha dibada Itobiya oo magaciisa Qariyay ayaa laga soo xigtay in Masar dhaqaale kubixinayso Fadhiisimada ciidan ee Jabhadaha looga samaynayo Gudaha Sudanta Kunfureed, waxaana diblamasigu uu intaa kudaray in madaxwayne Salva-Kiir uu aqbalay dhamaan dalabaadkii Masaarida.
Woyanaha ayaa walaac xoogan kaqaba dalka Masar oo xurguf kadhalatay biyo xidheenka Wabiga Nile ay kala soo dhaxaysay 6-dii sano ee lasoo dhaafay, waxayna Woyanuhu Horay u sheegeen in Kacdoonka dadwayne iyo Jabhadaha Hubaysan ee dagaalka kula jira maamulkooda laga soo abaabulayo magaalada Qahira.
Wasiirka warfaafinta Sudanta Konfured Michael Makuei oo Jawaab kabixinayay Handadaad dhinaca maamulka Woyanaha kagaadhay, ayaa sheegay inaysan wax cabsi ah kaqabin maamulka Addis ababa oo uu kusheegay kuwo iska riyoonaya oo aan xaqiiqda lasoconin.
Deg Deg Daawo:Jabhada ONLF iyo Ethiopia oo hesiis kala saxiixday.
Deg deg:Go’aamo Hordhaca oo kasoo baxay wada Hadalkii ONLF iyo Itobiya.
Waxaa Fiidnimadii caawa kasoo dhamaaday magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea wada Hadalo Halkaasi ...
Deg Deg Daawo: Somaliya iyo Ethiopia Oo ku Guulaystay inay Heshiisiiyan Jabuuti iyo Eritrea
Daawo Qoomiyadihii Aan Oromada ahaynoo Is Bahaystay Lana wareegay Adis ababa
Waxaa Magaalada ADIS ABABA ee xarunta Dalka ethiopia ka socda dagaal aad ukulul oo ...
Daawo Abwaan Ahmed Budul oo Dhaanto Amaan Cajiib ah utiriyay Ahmed Madoobe
Dhaanteeye Ahmed Budul ismaaciil ayaa maanso dhaanto amaan ah utiriyay Maamul Goboleedka Jubbaland Daawasho ...
Nuxurka warbixinta Wargayska Bloomberg kaqoray Go’aanka Jabhada ONLF & Wada Hadalka Itobiya.
Ururka mucaaradka ah ee Itobiya dagaalka kula Jiray ayaa sheegay in ay dalbanayaan afti ...
Topnews: EPRDF oo shirwayne aan caadi ahayn Laysugu Yeedhay & Abiy oo seeftu saaran tahay.
Isbahaysiga EPRDF ee Talada dalka Itobiya mudada dheer kasoo ariminayay oo kaduulaya xaalada cakiran ...